Inter Milan vs Ac Milan, Liverpool vs Man United & Faah-Faahino Ku Saabsan Kulamada Ugu Xasaasisan Ee Isbuuca Berito Bilaabanaya. - Laacib.net
Inter Milan vs Ac Milan, Liverpool vs Man United & Faah-Faahino Ku Saabsan Kulamada Ugu Xasaasisan Ee Isbuuca Berito Bilaabanaya.
by Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" | Friday, Oct 13, 2017
Todobaadka berito bilaaban doona waxaa dib usoo laabanaya horyaalada kala duwan ee qaarada yurub, in ku dhaw laba isbuuc ayey ciyaartoydu ku maqnaayeen gudashada waajibaadkooda qaran, balse ugu dambeyntii ‘Wey Soo laabteen”
Waa todobaad aad loogu xiiso qabay, waxaana dhici doona kulamo xasaasi ah oo si weyn loo wada sugayo – haba ugu weynaado kulanka ay aduunyada wada sugeyso ee Anfield ku dhexmari doona kooxaha Liverpool & Manchester United.
Waxaan kormeeri doonaa shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda yurub & kulamada darbiga ah ee ka jira – kuwaas oo aan ka sheekeyn doono inyar xogta ay xambaarsan yahiin.
LIVERPOOL VS MAN UNITED:
Kulankaan wuxuu soo gali doonaa 2:30 Duhurnimo maalinta sabtida ah, waana kulanka ugu horeeya isbuuca 8-aad ee horyaalka Premier League.
Kulankaan wuxuu soo bilowday 28-kii April 1894 – Liverpool ayaana ku dishay kooxdii la oran jiray Newton Heath.
Xidiga ugu safashada badan waa Ryan Giggs kaas oo kasoo muuqday ciyaartaan 48-kulan, sadex xidig ayaa ah xidigaha ugu goolasha badan waana Steven Gerrard, George Wall iyo Sandy Turnbull kuwaas oo min 9-gool dhaliyay.
Man United ayaa guulo badan kulankaan taas oo guuleysatay 79-jeer, halka Reds ay guul gaartay 65-jeer, balse Liverpool waa kooxda gaartay guusha ugu weyn ee kulankaan markii ay 7-1 ku dhufatay Newton Heath sanadkii 1895.
JURGEN KLOPP VS JOSE MOURINHO: Marxaladaha labada kooxood waa mid kala duwan Liverpool waxey fadhisaa booska 7-aad iyadoo leh 12-dhibcood, halka United ay fadhiso booska 2-aad iyadoo leh 19-dhibcood.
Paul Pogba, Maraoune Fellaini, Sadio Man & Adam Lallana ayaa labada dhinac ka maqnaan doona kuwaas oo ah xidigo muhiim ah.
INTER MILAN VS AC MILAN: Derby della Medonina –
Kulankaan waa kulanka ugu adag horyaalka talyaaniga ee jira isbuuca berito bilaabanaya, waana marka ay is wajahaan kooxaha isku magaakada ah ee ka wadan dhisan Milan.
Ciyaartaan waxey soo bilaabatay 10-kii January 1909, markaas oo ay labada kooxood ku kala baxeen barbaro 3-2 oo ay guusha ku raacday Milan, wixii markaasi ka dambeeyay waxey is arkeen 289-kulan dhamaan kulamada, waxaana guulo badan Ac Milan oo 111-jeer badisay.
Gooldhaliyaha kulankaan ugu sareeya waa Andriy Shevchenko kaas oo dhaliyay 14-gool, kulanka labada kooxood.
LUCIANO SPALLETTI vs VINCENZO MONTELLA
Labada macalin marxalado kala duwan ayey labada kooxood u horseedeen, Inter Milan wali wax guuldaro ah lama kulmin 19-dhibcood ayey shaqeysteen 7-dii kulan ee ugu horeysay – waxeyna fadhiyaan booska 3-aad iyagoo barbaro la ah Juventus.
Milan si wacan kuma bilaaban booska 7-aad ee horyaalka ayey fadhiyaan iyagoo leh 12-dhibcood, sidaas darteed waxey la kulmeen 3-guuldaro.
Dhanka kale kulamo kale oo waxaa jira derby ah kuwaas oo lagu balansan yahay isbuuca berito bilaabanaya iney dhacaan waxaana ka mid ah:
RB Leipzing vs Borrusia Dortmund.